EVY's Kitchen: Chocolate Truffle/ ချောကလက်ကိတ် (cream များများ)
Choco Truffle! This is 2nd cake for advance cake module. It was really fun to make this cake. Making and cutting different shapes of chocolate chips was reallyanew experience for me. The texture of the chocolate sheet must be just right (cant be too hard or too soft) in order to cut it into shapes properly. If it is too hard, it will break into pieces and if it is too soft, you wont be able to cut it and you will find it very difficult to handle. The work place was really inamess after the cake was decorated. However, it was kinda exciting though.
We have to use back the same recipe as Blackforest cake for basic sponge cake. The only difference is the chocolate cream + choco chips and the decoration of the cake.
Here is the recipe for choco cream (for one 8" cake)
Inasauce pan, bring fresh cream to boil.
Add in chocolate and continue to stir until well incorporated
Stir in the butter and allow it to cool
Once cool, whisk it until light
It now ready to decorate.
Recipe for choco sheet
Melt dark chocolates inamicrowave for about 1 min
Stir well and spread it onaplastic sheet. Leave it to set ( It will set it room temp. If your kitchen temp is high, you might want to leave it in the fridge for about 10-20s.)
Use cutter to cut the different shape as desire
Slice sponge into3layers.
Place 1st sponge layer inacake ring. Pat with sugar syrup.
Pipe in whipped chocolate cream. Level it.
Repeat step2and3and final layer must end with chocolate layer. Leave it in the fridge for 30mins- 1 hour before decorating with choco chips and cherry.
Remove from fridge and decorate accordingly.
ဒါကတော့ BTIC advance cake module ရဲ့ ဒုတိယ ကိတ်ပါ။ လုပ်ရတာ နဲနဲ ရှုပ်သလို ပျော်စရာလဲကောင်း ပါတယ် ။ ပထမ basic cake principle တုန်းက ၂ယောက်တစ်ဖွဲ့လုပ်ရတာပါ။ ဒီ advance module ကျတော့
၄ ယောက်တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်။ သင်တန်းကာလလည်းတစ်ဝက်ကျော်ပြီမို့ လူတွေလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မစိမ်းတော့ တဲ့ အတွက် လုပ်ရတာ တက်ညီလက်ညီ နဲ့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ် (ညအပြန်နောက်ကျတာကလွဲရင်ပေါ့) ။ ဒီကိတ်က Chocolate cream တွေနဲ့လုပ်ရတာအတွက် အရင် အပတ်ကထက်စာရင် ပိုပြီးပေလွယ်ပါတယ်။ ကိတ်မုန့်လည်း အပြီး ၄ ယောက်စလုံး လည်း choco cream တွေနဲ့ပေပွနေတာ အတော်ရီရပါတယ်။လုပ်နေတုန်းကတော့ ဇောနဲ့ သိပ်သတိ မထားမိကြပါဘူး။
basic sponge ကတော့ ပထမ တစ်ပတ်က black forest အတိုင်းပါဘဲ။ အချိုးအစားတွေ အကုန်အတူတူပဲ။ choco cream နဲ့ decoration လုပ်တာပဲ ကွာသွားတာပါ။ cream လုပ်တဲ့ အချိုးအစားတွေ အပေါ်မှာရေးပေးထားတယ်နော်။ ၄ယောက်စာ ကျိုရတော့ အိုးအကြီးကြီး နဲ့ လက်မောင်းအောင့်မတတ် တယောက်တလှည့်စီမွှေရပါတယ်။ ပြီးရင် မုန့်ကို ၃လွှာရအောင် ပါးပါးလေးလှီးပါ။ ပထမမုန့် အလွှာ ကို syrup လေးနဲနဲသုတ်၊ ပြီးရင် cream ထည့် ၊ပြီးရင် မုန့်အလွှာ ပြန်ထည့် နဲ့ သုံးထပ် ပြီးအောင် ထည့်ပါ။ ပြီးမှ ရေခဲသေတ္တာ ထဲမှာ ၃၀ မိနစ်လောက် ထည့်ရပါတယ်. နဲနဲ ခဲသွားအောင်လို့ပါ။ ပြီးရင် chocolate ပြားလေးတွေ၊ အမှုန့်လေးတွေ တွေနဲ့ အလှ ဆင်ပြီးရင် ရပါပြီ။ နောက်တစ်နှစ်မွေးနေ့ကိတ်တွေတော့ ကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်သွားပြီ လို့ထင်ပါတယ်။
အို..ကောင်းလိုက်တာ.. ကဲ.ကဲ မွေးနေ့မှာ ကိတ်တစ်လုံးလောက်အော်ဒါမှာချင်တယ် ရမလား။ ချယ်ရီသီးအစား စတော်ဘယ်ရီလေးတင်ပေးပါ။